Xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan bulshada Soomaalida Norway taasoo ujeedkeedu ahaa caleemo saarka Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Cadnaan Cabdulle Maxamed ayaa habeenkii xalay aha
Xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan bulshada Soomaalida Norway taasoo ujeedkeedu ahaa caleemo saarka Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Cadnaan Cabdulle Maxamed ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay xaafadda Grønland ee magaalada Oslo. Caleemo saarkaasi oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Culumaa'udiin, Haween iyo Dhalinyaro waxaa ugu horayn ka hadlay Xildhibaan Baashe Muuse oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Oslo isla markaana ah mudane door-weyn ku leh arrimaha Soomaalida wadanka Norway ayaa sheegay inay sharaf iyo maamuus u tahay in munaasabadan quruxda badan lagu marti qaado isla markaana uu goobjoog ka ahaado.
Xildhibaanka ayaa si kooban uga sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhisida iyo taabagelinta ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Norway isagoo balan qaaday in ka xildhibaan ahaan wixii maanta ka dambeeya aan la dhihi doonin siyaasada waxaa ku fadhiya dadka waa weyn.
Wuxuu sheegay Xildhibaan Baashe Muuse dhalinyarada xaq u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto, isagoo kula dardaarmay dhalinyarada inaysan siyaasada Soomaaliya ku dhexmilmin, halka uu balan qaaday inuu garabistaag buuxa siin doono ururka dhalinyarada.
Ex-Xildhibaanad Ubax C/laahi Aadan ahna musharax u taagan xilka xildhibaanimada golaha deegaanka ee magaalada Oslo ayaa u mahadcelisay ururka dhalinyarada, waxayna guddoomiyaha la caleemo saaray ku amaantay inuu yahay shaqsi wanaagsan oo hogaamin kara dhalinyaradda.
Dr. Aadan Xasan Azhari oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Oslo ayaa ku baaqay in la bogaadiyo dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoo ku sifeeyey Guddoomiyaha dhalinyarada Mudane Cadnaan inuu yahay nin dhalinyaro ah oo madax furan una qalma hogaanka ururka dhalinyarada ee loo caleemo-saaray, wuxuuna ALLE uga rajeeyey in howsha culus ee loo igmaday inuu ALLE la garab galo, wuxuuna taageero hiil iyo hooba u muujiyey dhalinyarada.
Sidoo kale madashii caleema saarka xubnihii ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxa Arrimaha bulshada Masjidka Towfiiq Maxamed Amiin, Udgoon, Adna kana tirsan urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Trømso iyo Maxamed Camaleeti ee waqooyiga dalka Norway.
Intaa kadib waxaa gabagabadii makroofanka lagu soo dhaweeyey Guddoomiyaha ururka Dhalinyarada Soomaalida Norway Mudane Cadnaan Cabdulle Maxamed, isagoo u mahadceliyey martidii ka soo qeybgashay kullanka iyo guddigii soo agaasimay, wuxuuna sheegay munaasabada caleema saarka inay dhiiragelin u tahay, halka uu tilmaamay inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha jira oo ay u baahan yihiin guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Norway.